भरतपुर महानगरः चुनाव पछिका ३५ दिनमा के के भयो ?
Thu, May 24, 2018 | 23:25:20 NST
11:22 AM ( 11 months ago )
चितवन, असार ४ – भरतपुर महानगरपालिकामा चुनाव भएको ३५ दिन पुगेको छ । मतगणनामा विवाद भएपछि अहिलेसम्म अन्तिम परिणाम आउन सकेको छैन् । मतगणना भइरहँदा मतपत्र च्यातिएपछि मतगणना वा फेरि मतदान भन्ने विषय अहिले सर्वोच्चमा पुगेको छ । असार ६ गतेको लागि पेसी तोकिएको छ । महानगर बासिन्दा सर्वोच्चको फैसला कुरिरहेका छन् ।
वडा नम्बर १९ को मतगणना भइरहेका बेला मतपत्र च्यातेपछि मतगणना रोकिएको थियो । वडा नम्बर २१ को मतगणना सकिएपछि १९ र २० को गरेर ६ हजार १ सय ६२ मत गन्न बाँकी थयो । त्यसबेला एमालेका मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली माओवादी केन्द्र र कांग्रेस गठबन्धनकी रेणु दाहाल भन्दा ७ सय ८४ मतले अघि हुनुहुन्थ्यो ।
त्यसपछि वडा नम्बर १९ को मत गन्न सुरु गरिएको थियो । वडा नम्बर १९ को २८ सय ६० मत खसेकोमा १८ सय ९ मत गनेर मतपरिणाम अपडेट गर्दा ज्ञवालीको ४१ हजार ६ सय ४१ र दाहालको ४० हजार ९ सय ८ मत आएको थियो । यसबेलासम्म ज्ञवालीको अग्रता ७ सय ३३ थियो ।
विवादको संकेत पहिल्यैदेखि
सुरुको दिन वैशाख ३१ गते चुनाव सकिएलगत्तै जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा मतगणना जेठ १ गते बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको थियो । सबैको चासोमा रहेको भरतपुर महानगरको मत गणनाभने १ गते बेलुका ४ बजेदेखि सुरु भएको थियो ।
धेरै जनसंख्या रहेको काठमाडौं महानगर र ठूलो भनिएको पोखरा महानगरको नतिजा आइसक्दा पनि भरतपुरको गणना भने सुस्त गतिमै चलिरहेको थियो । अन्य तहको मत परिणाम सार्वजनिक भइसक्दा भरतपुरको ढिलाहुँदा आक्रोश र आशंका बढ्दै गएको थियो ।
सुरुमा मत गणना ढिलो भयो भन्दै ९ वटा समूहमा मत गणना गरिएकोमा वडा नम्बर ४ को मत परिणाम पछि पुन ६ वटा गणक समूहमात्र बनाइएको थियो ।
गणनाकै क्रममा कुल प्राप्त मतमा निर्वाचन कार्यालयले त्रुटी गरेको भन्दै दलहरुले केही बेर मत गणना बिथोलेका थिए । नाराबाजी समेत भएको थियो । जेठ ७ गते अकश्मात फरक माग राख्दै गठबन्धन र केही दलले वडा नम्बर ९ को गणनापछि अघिल्लो वडा र पछिल्लो वडा मिलाएर गणना गर्न दवाव दिए । त्यसपछि अन्तिम र सुरु वडाबाट क्रमशः मत गणना थालियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्र गठबन्धनको माग अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले काम अघि बढाएका थिए ।
जब मध्यरातमा मतपत्र च्यातियो
भरतपुर महानगर वडा नम्बर १९ को २४ सय भोटगणना हुँदै गर्दा जेठ १४ गते राति ११ बजेको समयमा मतपत्र च्यातियो । मत पत्र च्यातेको आरोपमा माओवादीका दुई प्रतिनिधी मधु न्यौपाने र द्रोणबाबु शिवाकोटी तत्कालै गिरफ्तार भए । १५ गते गणतन्त्र दिवस परेकाले १६ गते उनीहरु विरुद्ध निर्वाचन कसुर ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको थियो । जेठ १८ गते उनीहरु चितवन अदालतबाट एक एक लाख धरौटीमा छुटेका छन् ।
१८ सय मतगणना हुँदासम्म एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवाली ७३३ मतले रेणु दाहाल भन्दा अगाडि हुनुहुन्थ्यो । आयोगको निर्देशन पश्चात च्यातिएको मतपत्रको अवस्था अवालेकन पश्चात प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले घटनामा कुल ९० मत च्यातेको पुष्टि गरेको छ । यस वडाको ९९८ मत गन्न बाँकी थियो । भरतपुर वडा नम्बर–२० को ३ हजार ३ सय भोट गणना गर्न बाँकी नै छ ।
रणभूमि र कब्जा शव्दमा आसंका
मतपत्र च्यातिए पश्चात मुख्य निर्वाचन अधिकृतले सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै गणना स्थल रणभूमि भएको जानकारी दिएपछि तत्कालै शंका उब्जिएको थियो । राति नै मतगणना स्थागित गरेको सूचनामा अधिकृतले कब्जा शव्द राखेपछि थप शंकाको वातावरण बनेको एमालेका कार्यकर्ताले बताउँदै आएका छन् ।
मतगणनामा सहभागी गणकहरु रणभूमि र कब्जा शब्द सुनेर अच्चमित भए । उनीहरुले त्यही शब्दमै शंका गरेका छन् । मतगणना स्थल रणभूमितुल्य बनाई असामान्य अवस्था सिर्जना भएकोले काबु बाहिरको परिस्थिति परि तत्काल मतगणना कार्य स्थगन राखी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४९ र ५० बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँदै मुख्य निर्वाचन अधिकृतबाट २०७४ जेठ १५ मा पत्र आयोगमा पठाइयो ।
पत्र पाएपछि सत्य तथ्य बुझी जेठ १७ गतेभित्र आयोगमा प्रतिवेदन पेश गर्न स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (३) बमोजिम आयोगका सहन्यायाधिवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा अनुगमन टोली चितवन खटाएको थियो ।
आयोगको जेठ १७ को पत्रबाट मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई गणनाको क्रममा रहेका मतपत्र मध्ये च्यातिई नोक्सान भएका मतपत्र संख्या यकिन गरी प्रतिवेदन पठाउनु भनि निर्देशन दिएकोमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुख समेतलाई रोहबरमा राखी मतपत्र जाँच गरी च्यातिई नोक्सान भएका मतपत्र संख्या ९० रहेको भनी १८ गते फेरि प्रतिवेदन आयोगमा पठाइएको थियो ।
फेरि मतदान गर्न आयोगको निर्देशन
निर्वाचन आयोगले प्रतिवेदनको अध्ययन गर्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ५० को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम मतगणना स्थलको अनधिकृत कब्जा भएको भन्ने पुष्टि हुन आएको हुँदा त्यही दफाको उपदफा (४) बमोजिम कब्जाबाट असर परेको चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १९ को मतदान केन्द्रको सम्पूर्ण मतपत्रहरू अवैध घोषित गरी मतदान रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यही ऐनको दफा ५० को उपदफा (५) बमोजिम मतदान रद्द गरिएका मतदान केन्द्रको मतदान हुने स्थान, मिति र समय तोकी फेरि मतदान गराउने व्यवस्था मिलाउन भरतपुर महानगरपालिका चितवनका मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय रोक्न सर्वोच्चमा रिट दर्ता भयो । निर्वाचन आयोगले सत्तापक्षको प्रभावमा परेर भरतपुर–१९ मा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यो निर्णय खारेजीको माग गर्दै रिट दर्ता भएको हो । अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डे र वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान बिकले २१ गते अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले चितवन भरतपुर महानगरपालिका वडा नं १९ मा जेठ २८ गतेसम्मको लागि निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । पहिलो पेशी जेठ २३ गते रहेकोमा अदालतले लिखित बहस नोट २८ गते माग गरेको थियो । सर्वोच्चले न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासमा तोकेको बेञ्च ८ नं. इजलासको क्रम संख्यामा राखेकोले मुद्दा पेशी नै नचढी समय सकिएको थियो । असार ६ गतेको लागि सुनुवाई मिति राखिएको छ ।
वडा नम्बर ४ र ७ पनि अदालतमा
महानगरका केही वडामा थोरै मतले मात्र हार जित भएको थियो । नसोचेको परिणाम आएको र थोरै मत अन्तरले पराजित भएपछि वडा नम्बर ४ र ७ नम्बर वडाका पराजित उम्मेदवारले अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उच्च अदालत हेटौंडाले अर्को आदेश नआएपसम्म वडा नम्वर ४ र ७ नम्बर वडाका नयाँ प्रतिनिधिलाई काम नगर्न भनेको छ ।
२० गते शनिबार बेलुका बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले वर्तमान शान्ति सुरक्षाको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर राख्दै विभिन्न किसिमका हुल दंगा, जुलुस गर्न निषेध गरेको थियो । शान्ति सुरक्षा, अमनचयन कायम गर्न गराउनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, भरतपुर महानगरपालिका कार्यालय, अस्पताल, मतगणनास्थल रहेको कभर्डहल र प्रशासनिक कार्यालयहरु रहेकोे स्थानसमेतमा धर्ना, जुलुस, आमसभा, विरोध सभा, कोणसभालगायतका कार्य हुन नदिन निषेधित क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ ।